အနိုငျအထကျ ဖှင့်သောသူ | The Breaker | Real Conversion
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်၏
၂၀၁၄၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက် ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်။
“အနိုင်အထက်ပွင့်သောသူသည် သူတို့ရှေ့မှာ သွားရ၏။ သူတို့သည်လည်း အနိုင်အထက် ဖွင့်၍ တံခါး၀ဖြင့် လျှောက်သွားကြ၏။ သူတို့ရှင်ဘုရင်သည် သူတို့ရှေ့မှာ သွား၍ ထာ၀ရ ဘုရားသည် လမ်းပြတော်မူ၏” (မိက္ခာ ၂း၁၃)။
ပရောဖက် မိက္ခာက၊ ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်သော ဣသရေလလူတို့ ပြန်လည်၍ စုဝေးကြမည် ကို အချက်သုံးချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်၌၊ ဣသရေလလူ တို့ ကတိတော်နယ်မြေထဲ ပြန်လည်အခြေချမည့် အကြောင်းအရာကို ဦးစွာပထမ ဖော်ပြထားပါသည်။
ကြိုတင်ဟောကြားချက်နှင့် ပါတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်သော အချက်သည် ဣသရေလလူတို့ စတင်၍ မိမိတို့နေရင်းပြည်သို့ စုဝေးနေကြပြီဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဣသရေလ တို့၏ တိုင်းနိုင်ငံကို ၁၉၄၈၊ မေလ ၁၄ရက်နေ့၌ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဒေးဝိဒ်ဘင် ကူရီယန်းက၊ ဣသရေလနိုင်ငံကို ထူထောင်နိုင်ပြီဟူ၍ အသိအမှတ်ပြု ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ထောင်ချီ သော ဣသရေလလူတို့သည် မိမိတို့နေရင်းပြည်သို့ ပြန်လည်စုရုံး ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ မိက္ခာအခန်းကြီး ၂၊ အပိုဒ်ငယ် ၁၂တွင်၊
“အိုယာကုပ်၊ ငါသည် သင်၏အမျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်း၊ ကျန်ကြွင်းသော ဣသရေလအမျိုး သားအပေါင်းတို့ကို၎င်း၊ ဆက်ဆက်စုဝေးစေမည်” (မက္ခာ ၂း၁၂)။
ခရစ်တော်သည် ကြွလာခြင်းနှင့် စပ်လျှန်း၍ ဂျူးပညာရှင် ဒေါက်တာ ချားလ်လီဖက်စ်ဘတ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဗါဗုလုန်အင်ပါယာက စုရုံးလာကြသောသူတို့ကို ဆိုင်းရပ်စ်စစ်ဗိုလ်က အနိုင် သိမ်းခဲ့ပေမယ့် ထာ၀ရဘုရား၏ကတိတော်ကို ထိပါးဖျောက်ဖျက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သာဖြစ်သည်။ “သင်၏အမျိုးအပေါင်း” ဟု မိက္ခာဖော်ပြချက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ပြန်လည် စုဝေးခြင်းသည် နေရာတစ်နေရာ၌ ဣသရေလအဖြစ် စုဝေးကြပါလိမ့်မည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂သည် ကတိတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သော နှလုံးသွေးကြောဖြစ်ပြီး ၎င်းကျမ်း၌ ဖော်ပြချက်သည် ဆက်ဆက်ဖြစ်လာမည်ကို ဖော်ပြ နေသည်။ ဘုရားသခင်၏လူတို့သည် သိုးစုပမာ စုဝေးကြပါလိမ့်မည်။။ အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူက လမ်းပြပေးပြီး၊ ဆူးညောင့်ခလုတ်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မည်။ ဣသရေလလူတို့၏ အရှင်သခင် မေရှိယသခင်က လမ်း၌အတားအဆီး အနှောင့်အယှက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သူကိုယ် တိုင် လမ်းပြဦးဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ မေရှိယသခင် ကိုယ်တိုင် လမ်းပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်သူအ ပေါင်းတို့၏ မြို့တံခါး၀တို့ကို ဖြိုဖျက်လျှက် မိမိလူတို့ကို ထိုလမ်းဖြင့် ဦးဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို အစီစဉ်ကို အဘယ်မည်သူကမှ တားဆီး၍မရနိုင်ပါ။ ကတိတော်နှင့်ဆိုင်သော အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင် က ဦးဆောင်လျှက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါင်းတို့ဖြင့် ဦးဆောင်လမ်းပြပေးမည်ဖြစ်သည်” (Charles L. Feinberg, Th.D., Ph. D., The Minor Prophets, Moody Press, 1982 edition, p. 162).
ဒေါက်တာ ဖိန်းဘက်စ်က “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” မည်သူဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြ ပေးသည်။ ထိုသူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်၊ ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင် အတားအဆီးအနှောက် အယှက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ ဣသရေလတို့အား မိမိတို့နေရင်းပြည်၊ ကတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်µ ကြီးမားသောဘေးဒဏ်ကြီး၌ပင် “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ယေရှုဘုရားက လမ်းပြပေးပါလိမ့်မည်µ ဂျူးလူတို့အဖို့ လမ်းကို ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မည်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးကယုံကြည်သူများ ခရစ်တော်၏အနှစ်တစ်ထောင်ကာလထဲ ဣသရေလနိုင်ငံထဲသို့ စုဝေး ရောက်လာကြပါလိမ့်မည်။
“အနိုင်အထက်ပွင့်သောသူသည် သူတို့ရေ့မှာ သွားရ၏။ သူတို့သည်လည်း အနိုင်အထက် ဖွင့်၍ တံခါး၀ဖြင့် လျှောက်သွားကြ၏။ သူတို့ရှင်ဘုရင်သည် သူတို့ရှေ့မှာ သွား၍ ထာ၀ရ ဘုရားသည် လမ်းပြတော်မူ၏” (မိက္ခာ ၂း၁၃)။
အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူက ဦးဆောင်ပြီး နှစ်တစ်ထောင်ကာလထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ထိုအရှင်သခင်၏ နာမတော်သည်ကား သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်၏µ အာမင်µ တမန်တော် ရှင်ဟောဟန်က ကြီးစွာသော ဘေးဒဏ်ကာလ၌ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ယေရှုဘုရားကို ဗျာဒိတ် ရူပါရုံမြင်ခဲ့သည်။
“ထိုအခါ ကောင်းကင်ဘုံ ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသည်ကို ငါမြင်လျှင် မြင်းဖြူရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူ သည် သစ္စာဟူသောအမည်၊ သမ္မာဟူသော အမည်ရှိသတည်း။ ထိုသူသည် တရားသဖြင့် စီရင်တတ်၏။ တရားသဖြင့် စစ်တိုက်တတ်၏။ မျက်စိတော်သည် မီးလျှံကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဦး ခေါင်းပေါ်၌ သရဖူများကို ဆောင်း၏။ ကိုယ်တိုင်မှတစ်ပါး၊ အဘယ်မျှမသိသောနာမတော် သည် ရေးထားလျှက်ရှိ၏။ သွေး၌နစ်ပြီးသောအဝတ်ကို ဝတ်၏။ ဘုရားသခင်၏ နုတ်က ပတ်တော်ဟူသော အမည်ရှိ၏။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ချေတို့သည် မြင်းဖြူကိုစီးလျှက်၊ စင်ကြယ် သော ပိတ်ချောဖြူကို ဝတ်လျှက် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ လူမျိုးတို့ကို ဒဏ်ခတ်စရာ ဖို့ ထက်သောသံလျှက်သည် ခံတွင်းတော်ထဲကထွက်၏။ သူတို့ကို သံလှံတံနှင့် အုပ်စိုး တော်မူမည်။ အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဒေါသအမျက်တော်၏ စပျစ်သီးနယ်ရာတန်ဆာကို ဖိနင်းတော်မူမည်။ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်၊ သခင်တို့၏ သခင်ဟု ဘွဲ့နာမတော်သည် အဝတ်တော်၌၎င်း၊ ပေါင်တော်၌၎င်း၊ ရေးထားလျှက်ရှိ၏”။ (ဗျာဒိတ် ၁၉း ၁၁-၁၆)။
ထိုအမျက်တော်နေ့၌ မည်သို့ပြောဆိုကြမည်ကို ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်က ပြောကြားသည်မှာ၊
ဖြောင့်မတ်သူတို့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြင့် ကြွလာ
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ ခုနှစ် ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “ယေရှုစိုးစ”)။
ယေရှု၊ အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူက မာန်နတ်အား အနိုင်အထက်တားဆီး ဖျက်ဆီးပါလိမ့်မည်µ ထို အရှင်က ဣသရေလရန်သူဟူသမျှကို တားဆီးကွယ်ကာပါလိမ့်မည်၊ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့ကို လည်း၊ မာန်နတ်ရန်စွယ်မှ တားဆီးကွယ်ကာပါလိမ့်မည်µ ဟာလေလုယာµ
အမှန်တကယ်ပင် ယေရှုသည်၊ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” အမှန်ပင်ဖြစ်သည်µ ]အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ} ဟုခေါ်သော ခရစ်တော်အကြောင်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ မိတ်ဆွေ ဤတရားဒေသနာတော် ကို အသေအချာ နားထောင်စေလိုပါသည်။
ယေရှုဘုရား၌ ဆုလဒ်များစွာရှိသည်၊ ယေရှု၌ များစွာ ထူးခြားသောအကြောင်းများရှိသည်၊ နာမ များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်၌ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ဟူ၍ ထင်ရှား ဖော်ပြထားသည်။ မကြာခဏ ယေရှုကို “ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်” ဟုဖော်ပြသည်ကို တွေ့ရသည်။ တစ်ခါတရံ အမြင့်ဆုံးသော “ယဇ်ပုရောဟိတ်” ဟုလည်း ထင်ရှားဖော်ပြထားသလို တခါတစ်ရံ “ပရောဖက်”ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ တခါတရံ ရှင်ဘုရင်ဟု ထင်ရှားသည်။ သို့သော် “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ”ဟူ၍ ရှားပါးစွာသိကြ၏။ သို့တိုင်အောင် ယေရှုသည် “အနိုင်အထက်ဖွင့်သောသူ” ဖြစ် သည်ကို ဒီမနက်ဆင်ခြင်ကြစို့။ ထိုသခင်သည် ကြွလာသောအခါ ရှေ့ဣသရေလ လူတို့ကို မိမိတို့နေ ရင်းပြည်သို့ စုဝေးစေမည်ဖြစ်သည်၊ အခြေအနေမဲ့ အာဗြဟံနှင့် ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံစေ မည်ဖြစ်သည် (ခ် ကမ္ဘာ ၁၂း၁၊ ၁၅း ၁၈း စသဖြင့်)။ ယေရှုသည် ချည်နှောင်သမျှတို့ကို ဖြေလွတ်ပေး ပါလိမ့်မည်။ ဣသရေလလူတို့အား နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးမည် မာန်နတ်၏ပရိယာယ်ကို တားဆီးဖျက် ဆီးပါလိမ့်မည်µ
ယခုပင်လျှင် ယေရှုသည် “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ဖြစ်သည်။ ယေရှုအား “ကယ်တင်ရှင်” ဟု ခေါ်သကဲ့သို့၊ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ”ပင် ဖြစ်သည်။ အာမင်µ အာမင်µ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သော သူ”ဖြစ်သော ယေရှုအကြောင်း ယခုပင်စားစား ဆင်ခြင်ကြပါစို့။
၁။ ပထမ၊ ယေရှုသည် စာတန်ရန်စွယ်ကို ချိုးပစ်ခဲ့သည်။
ရှေ့ကနဦးပင် စာတန်သည် ထာ၀ရဘုရားကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောကြောင့်၊ ကောင်းကင် ဘုံက နှင်ချခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ မာန်နတ်သည် မြေအသွင်ဆောင်၍ တားမြစ်ထားသော အသီးကို လူမိန်းမအား စားစေပြီး၊ လူမိန်းမက လူယောကျာF;အား စားစေခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် စာတန်မာန်နတ် သည် မြေတပြင်လုံးရှိ လူသားထုတစ်ခုလုံးကို အနိုင်းအပိုင်းအုပ်စိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ လူသားတို့၌ မျော်လင့်စရာ မရှိတော့ပေ။ သို့သော် ထာ၀ရဘုရားက လူသားတိုအား ကတိတစ်ခုပေးအပ်ခဲ့ပြီး မာန်နတ်ကို မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏မျိုးနွယ်ကို၎င်း၊ ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်။ သင်သည် သူ၏ဖနှောင့်ကို ကြိတ်လိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာ ၃း၁၅)။
ခေတ်အဆက်ဆက် ရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ နောက်ဆုံးတွင် မိန်းမ၏မျိုးနွယ်ကို အပျိုကညာမာရိက မွေးဖွားခဲ့ပြီး မကြာမှီ မာန်နတ်အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့လေသည်။ မာန်နတ်၏ တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့် ဟေရုဒ်သည် သူငယ်တော် ယေရှုကို အသေသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသည်µ သဲကန္တာရ၌ မာန်နတ်က ယေရှု အား မြေပေါ်လဲကျရန် သုံးကြိမ်ကြိုးစားသွေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုက “ကျမ်းစာလာသည်ကား” “ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား” “ကျမ်းစာလာသည်ကား”ဟူ၍ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် စာတန်ကို အလဲထိုးခဲ့ပါ သည်။ ဤသည် ကြီးစွာသော စစ်ပွဲဖြစ်သည်၊ သို့သော် ယေရှု”အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” က နောက် ဆုံး၌ အနိုင်ယူခဲ့ပါသည်။ “ထိုအခါ မာန်နတ်သည် အထံတော်မှ ထွက်သွား၍ ကောင်းကင်တမန်တို့ သည် ချဉ်းကပ်လျှက် လုပ်ကျွေးကြ၏” (မဿဲ ၄း၁၁)။
ယေရုရှလင်မြို့သို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ယေရှုရောက်သောအခါ၊ မာန်နတ်က သူ၏အပေါင်းအပါတို့ အား စည်းရုံးပြီး ကယ်တင်ရှင်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ မာန်နတ်သည် “ယုဒရှကာရုတ်ထဲ ဝင်ပြီး”၊ ရုဒရှကာရုတ်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံသို့သွားပြီး ကယ်တင် ရှင်ယေရှုကို မည်သို့ဖမ်းဆီးရမည်ကို တိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ည၌ပင် ယေရှုအား ဂေသရှေမာန် ဥယျာဉ်ထဲ၌ အဖမ်းခံခဲ့သည်။
မာန်နတ်က ယေရှုအား ဥယျာဉ်တော်၌ ဖမ်းဆီးဖို့ ကြံစည်ခဲ့ဟန်တူသည်ဟု စဉ်းစားမိသည်။ မာန် နတ်က ရုဒရှကာရုတ်အထဲ ဝင်ပြီးနောက်၊ မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားဖော်ပြခြင်းမတွေ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ် အရမ်းအံ့ဩမိသည်။ သတင်းကောင်းကျမ်း ၄ကျမ်း၌လည်းမတွေ့ရတော့ပါ။ ဤအရာ၌ အကြောင်းအ ရာတစ်ချို့ရှိလိမ့်မည်ဟု ထင်သည်၊ တစ်လောကလုံး၏အပြစ်ကို ဘုရားရှင်က ယေရှုအပေါ် ထင်တော် မူသောအခါ၊ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ “မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း” (လုကာ ၂၂း၄၄)။ ထိုအခါ မာန်နတ်သည် ယေရှု၏အသွေးတော်ကို မကြည့်နိုင်သောကြောင့် “ကိုယ်တော်အား စွန့်ခွါ”သွားရခဲ့သည်။ “ထိုအခါကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှားလာ၍ ကိုယ်တော် ကို အားပေးရ၏” (လုကာ ၂၂း၄၃)။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ ယုံကြည်သူတို့အား မာန်နတ်က တိုက်ခိုက် သောအခါ “သိုးသူငယ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် အောင်မြင်၍” (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၁) ဟုဆိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်၌လည်း အသွေးတော်မာန်နတ် ထွက်ပြေးဟန်တူသည်။ မာန်နတ်သည် မိမိအမျက်ဒေါသကို နိုးဆွပြီး ယေရှုကို အသေသတ်ဖို့ကြိုးစားတော့၏။ သို့သော် အသွေးတော်ကို မြင်သောအခါ မာန်နတ်သည် အမှောင်ထုထဲ ထွက်ပြေးလေသည်။ မိတ်ဆွေ တို့သွေးဆောင် ဖျား ယောင်းခြင်းခံရသောအခါ၊ ၎င်းအဖြစ်အပျက်ကို သတိရကြပါ။ ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါµ ထပ်ခါတလဲလဲ အသွေးတော်ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါµ ထပ်ခါ တလဲလဲ အသွေးတော်ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါµ
တိုက်ပွဲသည် ဂေသရှေမာန် ဥယျာဉ်၌ပင် ငြိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဆက်လတ်၍ လက်ဝါး ကားတိုင်ဆီသို့ ခါးသီးစွာ ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါသည်။ စာတန်သည် ခရစ်တော်၏ခြေဖနှောင့်ကို ကြိတ်ခဲ့ သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက စာတန်၏ခေါင်းကို ကြိတ်ခဲ့သည်။ ကယ်တင်ရှင်သည် ကားတိုင်ထက်မှ “အမှုပြီးပြီ”ဟု ဟောဟစ်ခဲ့သည် (ယောဟန် ၁၉း၃၀)။ စာတန်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင် စာတန်သည် ရှုံးနိမ့်သွားသော ရန်သူပင်ဖြစ်သည်။ မာန်နတ်သည် ဤလောက၌ မကောင်းမှု ဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ ခရစ်တော်အား အနိုင်ယူပိုင်ခွင့် မရှိတော့ချေ။ ယေရှုဘုရား၏ အသွေး တော်စွန့်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ယေရှုသည် မာန်နတ်၏ တန်ခိုးကို ချိုးဖျက်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သော အသွေးတော်တန်ခိုးနှင့် ခန္တာကိုယ်ဖြင့်ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းသည် မာန်နတ်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး၊ အပြစ်နှင့်သေခြင်းငရဲမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းသည် မာန်နတ်၏တန်ခိုးကို ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်µ မာန်နတ်၏ စုံစမ်းသွေး ဆောင်ခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ချစ်သော ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေများ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ သင်၏ရန်သူဟာ ချို့တဲ့သောရန်သူပါ။ အနိုင်ပိုင်းခြားခြင်း ခံသာရန်သူသာလျှင်ဖြစ်သည်µ
သင်ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စာတန်ကို ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ။ သူသည် ချိုးပဲ့ခြင်းခံရ သောသူပါ။ အမင်္ဂလာခံရသောရန်သူသာဖြစ်သည်µ သင့်အား တွေဝေစေနိုင်သော်လည်း၊ သင့်အား ဘယ်တော့မှ မဖျက်ဆီးနိုင်တော့ပါ။ အနိုင်ယူပြီးသော ရန်သူနှင့်သာ သင်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေအတွက်သာ ထိုသို့ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးသော ဝိညာဉ်တွေအတွက်တော့ သင့်အပေါ် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ ယေရှုသည် အပြစ်သားတို့၏နှလုံးသားကို ချိုးဖဲ့တော်မူသည်။
ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသော သူတို့၏စိတ်သည် မာကျောလှသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်အကြောင်း၊ ငရဲအကြောင်း၊ နောက်ဆုံးသော တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကို ဟောတတ်သည်။ ထိုစဉ်ခဏ အပြစ်သားတို့သည် ကြေကွဲကြ၏။ အသင်းတော်မှ ထွက်ခွါသောအခါ မျက်ရည်ကို သုတ်ပစ်ကြပြီး၊ မိမိတို့ ကားရှိရာသို့ ရောက်သောအခါ၊ ရယ်မောလျှက် တနာရီ၊ နှစ်နာရီ့ခန့် ကြာသောအခါ အပြစ်သည် ထပ်၍ ကျူးလွန်တတ်ကြပါသည်µ ငမိုက်သားတို့၏စိတ်သည် မာကြောလျှက်ရှိသည်။
တခါတလေကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာအကြောင်းကို ဟောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်စား အသေခံပေးခြင်းဖြင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိကြသည်ကို ဟောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် မျက်ရည်ဝဲသည့် တိုင်အောင် ထိုမေတ္တာတရားအကြာင်း ဟောခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ယေရှု၏ ကားတိုင်၌ ဝေဒနာခံခြင်း၊ မြင့်မြတ်သော ကောင်းကင်ဘုံက အသွေးတော်အကြောင်း ဟောခဲ့သည်။ ထိုအခါ သင့်နှလုံးသား ကြေကွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော် အသင်းတော်က ထွက်ခွါပြီး သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့် တွေ့ဆုံ လျှက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရသောအခါ၊ သင့်စိတ်နှလုံးသည် မာကြောလျှက် ရှိမြဲရှိ၏µ
အချို့သော မိခင်များက သူတို့အဖို့မျက်ရည်ကျလျှက် ဆုတောင်းပေးပါသော်လည်း သင်တို့စိတ် သည် မာကျောလျှက် ရှိမြဲရှိနေသည်။ တချို့သော ဖခင်များက သင်တို့ကို ဆုံးမသွန်သင်သော်လည်း၊ စိတ်နှလုံးသားမပြောင်းလဲကြပေ။ အချို့တို့ဆိုလျှင် လက်ထောက်ဆရာ ဒေါက်တာ ကေကန်နှင့် အစဉ် အမြဲတွေ့ဆုံတရားဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း အသက်တာမပြောင်းလဲခဲ့ကြပေ။ ထိုသူက သင့်အား ညို့ ငယ်သောမျက်ဝန်းဖြင့် သင်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာဖို့ မေတ္တာရပ်ခံနေခဲ့သည်။ သို့ သော် သင်သည် ငြင်းပယ်နေတုန်းဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းထိုင်ခုံက ထွက်သွားသောအခါ သင့်ကိုယ် သင်ပင် ဘာမဟုတ်သောသူကဲ့သို့ လျှစ်လျှူရှုလျှက် နေခဲ့သည်µ သူသည် စ့.Ds ဘွဲ့ နှစ်ခုကို ရရှိခဲ့ သည်၊ ဘွဲ့တခုသည် သချာF ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်ခုမှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူသည် မာစတာ ဒီဂရီကို တာဘောက်သီဩလော်ဂျီကျောင်းမှ၎င်း၊ ဆွတ်ခူးခဲ့သည်µ သူသည် အသက်၄၀လုံးလုံး ဝိညာဉ်ပျောက်လူသားတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အဖြေရှာ ခဲ့သည်။ သို့တိုင်အောင် သင်တို့က သူ့အား ဘာမှအရေးမပါသော ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကြတယ်µ ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ အလျှင်တဆော သွားကြပြီး ထိုအခန်းထဲက ထွက်သွားသောအခါ ဘာဆိုဘာ ကိုမှ မမှတ်မိကြတော့ဘူးµ
ကျွန်ုပ်မတ်တပ်ရပ်လျှက် တရားဟောသောအခါ၊ အချို့သောသူတို့က ပြောင်လှောင်ရယ်ကြမည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကြာကြာ ဟောနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး ကျွန်ုပ်အသက်ကြီးပါပြီ။ အသက်ငယ်ပြန်သည်သော်လည်း ငယ်သည်နှင့်အမျှ ပြောင်ကြ၊ လှောင်ကြ ပြက်ရယ်ပြုနေကြပေမည်။ အချို့သောသူတို့က “ဒီလူဘယ်လိုလူမျိုးလဲ¿၊ ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြောဖို့ ရဲလားချေလား ဘယ်သူမို့ လို့လဲ¿ ဟူ၍ ထင်ကောင်းထင်နေမည်။ ကျွန်ုပ်ပြောသမျှ မှန်သည်ဟု အသိအားဖြင့် ထင်ကောင်း၊ ထင်ကြမည်၊ သို့သော် ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်ဖို့ရန် နှိမ့်ချသောစိတ်မရှိကြပေ။
ကျွန်ုပ်သည် မိမိ၏အသက်တာ လေးပုံ၊ သုံးပုံခန့် ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့် အသစ်ပြောင်းလဲ ခြင်းအသက်တာဖြစ်ဖို့ လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဒေါက်တာ ဒီဂီရီ သုံးခုရရှိသည်။ ပြောင်း လဲခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်သော စာအုပ်များစွာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော် သင်သည် ကျွန်ုပ်အား ကြည့်လျှက် “ဤသူဘာတွေတတ်ထားသလဲ¿ ဟု ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။
သို့ပါသော်လည်း “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ”တည်းဟူသော ယေရှု သင့်ထံသို့ ကြွလာသောအခါ ဒေါက်တာ ကေကန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် လွယ်ပင့်တကူ ဖြစ်မည်µ ကျွန်ုပ်တို့က ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးသားကို ကြေကွဲနှိမ့်ချအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ယေရှုတတစ်ပါး တည်းသာ တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်µ အလွန်ချောသော အမျိုးသမီးငယ်သည် ခက်ထန်သော မျက်နှာဖြင့် ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းသို့ လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကို တွေးနေမိ၏။ ထို့နောက် တညနေခင်းတွင်၊ ၎င်း အမျိုးသမီးငယ်သည် နူးညံ့သိမ်မွေးသော မျက်နှာဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သော သူ” ယေရှုက ထိုသူထံသို့ ကြွလာတော်မူသောကြောင့် သူမသည် နူးညံ့သိမ်မွေးနေပါသည်။ ထို့ နောက် မကြာမှီ နှစ်နာရီအကြာတွင် သူအား ကယ်တင်ရှင်ထံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်µ “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ယေရှုက သူအား ထိုနေ့ကျွန်ုပ်နှင့် ဓမ္မဆွေးနွေးသောအခါ တို့ထိသောကြောင့်ဖြစ်သည်µ
၃။ တတိယ၊ ယေရှုက အပြစ်ချည်နှောင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေပြီ။
ကနေ့နံနက် အသင်းတော်ဘုရားကျောင်း၌ ထိုင်နေသော သူတို့အထဲက အချို့တို့သည် အပြစ်၏ချည်နှောင်ခြင်းကို ခံသောသူရှိမည်။ သူကိုယ်သူတော့ သိမည်မဟုတ်ပေ။ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်မှ လွတ်မြောက်သောသူပါဟု ထင်ပေမည်။ သို့သော် ထိုသူသည် အကျဉ်းသားဖြစ်နေသည်။ မိမိ သည် မိမိသွားလိုရာသွားနိုင်သည်ဟု ထင်နေမည်။ သို့သော် အပြစ်ဒဏ်ကျခံဖို့ ထောင်ထဲသွင်းချသော အခါ ထိုသူသည် မလွတ်မြေက်ရတော့ပေ။ ထောင်ထဲ၌သာ သွားလာနေရပေမည်။ အရက်ဆိုင်က ထောင်ပြတင်းပေါက်မှသာ တွေ့ရတော့မည်။ သင်သည် ယေရှုကို ငြင်းပယ်aသောကြောင့် ယခုပင် လျှင် အချို့တို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံနေရပြီဖြစ်သည်။
တရားဟောဆရာတစ်ပါးသည် လိင်စိတ်ကြွ အပြာကားအကြောင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ မကြာခဏ ပြောပြခဲ့သည်။ လူ့မြင်မခံရအောင် လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်ပြီး၊ ထိုသို့ဖြင့် အပြစ်သံကြိုး ချည်နှောင်ခြင်း ခံရအောင် မြူဆွယ်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ မကြာခဏ တရားဟောဆရာသည် အရက်သေစာသေက် စားခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကျွန်ပြုစေသည်ဟု ဟောကြားခဲ့သည်။ တစ်ခါတရံ ကြွားဝါတတ်သော သူတို့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ မကြခဏပြောကြားသည်မှာ၊ အချို့တို့သည် မျော်လင့်ချက်ကင်း မဲ့သော ချည်နှောင်ခြင်းကို ခံရကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုဆရာက ၎င်းအကြောင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး အထူးတလည် မေးမြန်ခြင်းတော့ မရှိပါ။ သို့သော် သူသိထားသည်မှာ ရှေ့ကျ၍ မေးမြန်းခြင်းမရှိ၊ မှားယွင်းစွာ လူနာ၏အခြေအနေကို ဖော်ပြသော လူနာနှင့်အလားတူနေပါသည်။
ချားလ်ဝီစလီပြောကြားသကဲ့သို့ ယေရှုသည် “အနိုင်အထက် ဖွင့်သောသူ” ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်တော်သည် အပြစ်တန်ခိုးကို ချိုးဖျက်
(၁၇၀၇-၁၇၈၈၊ ချားလ် ဝီစလီသီကုံးသော “လူအပေါင်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်”)။
ကျေးကျွန်µ ကျေးကျွန်µ ကျေးကျွန်µ ခရစ်တော်ဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား သင့်ကို ကျေးကျွန် ဘ၀လွတ်မြောက်စေပြီဟု ဆိုသည်µ ကိုယ်တော်ကြွလာ၊ ကိုယ်တော်ကြွလာ၊ မှောင်မိုက်သံကြိုးချည် နှောင်သူတို့ကို ဖြေလွတ်ဖို့ ကိုယ်တော်ကြွလာပြီµ သင့်ကို ဖမ်းစားညို့ယူနေသောအပြစ်မှ သင့်အား လွတ်မြောက်စေပြီ။ သင့်ကိုသင် ကျွန်ပြုနေခြင်းမှ ကိုယ်တော် ကယ်တင်နိုင်သည်µ သင်ကြောက်လန့် နေသော သံသယထောင်အတွင်းက ကိုယ်တော်သင့်အား ကယ်တင်နိုင်သည်µ
တချိန်တခါတုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်မကို တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်း တက်ဖို့ နှစ်ကြိမ်ထက် မခေါ်နိုင်ဘူး” ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှုဘုရားက သူ၏မာကျောနေ သောစိတ်နှလုံးသား သံကြိုးချည်နှောင်ခြင်းမှ ဖြေလွတ်ပေးခဲ့သဖြင့် ယခုတွင် ထိုသူသည် ဘုရား ကျောင်းသို့ အမြဲပါဝင်နေပါသည်။ သူက မိမိသည် အသစ်ပြောင်းလဲပြီးသောသူဖြစ်ကြောင်း မကြာခ ဏ ငြင်းဆိုနေသော်လည်း တကယ်တော့ သူမပြောင်းလဲခဲ့သေးပေ။ မကြာမှီ “အနိုင်အထက်ဖွင့်သော သူ” ယေရှုက စာတန်မာန်နတ်၏ ချည်နှောင်မှုကို ဖြေလွတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် ယေရှု ဘုရားထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လျှက် ရှိတော့၏။
သင့်အပြစ်မှ ကယ်တင်ဖို့ရန် ကိုယ်တော်ကားတိုင်ပေါ် အသွေးသွန်းလောင်းပြီးဖြစ်သည်။ သင့် အား ထာ၀ရအသက်ပေးဖို့ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုပင် ချဉ်းကပ်လိုက်ပါµ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး သင်ဆွေးနွေးလိုပါက ယခုပင် ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။ ထိုဆွေးနွးခန်းထဲသို့ သွားကြမယ့်သူတို့အဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒေါက်တာ ချန်မှ ဆုတောင်းပေးပါ၊ အာမင်µ
ဤတရားဒသေနာစာမူမြားကို ကူးယူ၍မရပါ။ သငျသညျ Dr. Hymers ၏ခှငျ့ပွုခကြျမလိုဘဲအသုံးပွုနိူငျသညျ။ သို့သောျ
Dr. Hymers ၏ ဗှီဒီယိုတရားဟောခကြျမြားကိုမူ ခှငျပွုခကြျဖွငျ့သာအသုံးပွုနိူငျသညျ။
-ဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘေလ် ပရုတ်ဟုန်းမှ (မိက္ခာ ၂း၁၂-၁၃) ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ ခုနှစ် ချားလ်ဝီစလီ သီကုံးရေးသားသော “လူမျိုးအပေါင်းကိုးကွယ်” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်)။
“အနိုင်အထက်ပွင့်သောသူသည် သူတို့ရေ့မှာ သွားရ၏။ သူတို့သည်လည်း အနိုင်အထက် ဖွင့်၍ တံခါး၀ဖြင့် လျှောက်သွားကြ၏။ သူတို့ရှင်ဘုရင်သည် သူတို့ရှေ့မှာသွား၍ ထာ၀ရ ဘုရားသည် လမ်းပြတော်မူ၏” (မိက္ခာ ၂း၁၃)၊
(မိက္ခာ ၂း၁၂)၊ (ဗျာဒိတ် ၁၉း၁၁-၁၆)။
၁။ ပထမ၊ ယေရှုသည် စာတန်ရန်စွယ်ကို ချိုးပစ်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာ ၃း၁၅)၊
(မဿဲ ၄း၁၁)၊ (လုကာ ၂၂း၄၄)၊ (ဗျာ ၁၂း၁၁)၊ (ယော ၁၉း၃၀)။